June 2015 ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
English Speaking – Job Expressions (14) by Sayar WinNaingOo
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, June 30, 2015 SayarWinNaingOo No comments
English Speaking – Job Expressions (14)
ရုံးစည်းကမ်း ရုံးအလုပ်နဲ့ ဆိုင်တာလေးတွေဆိုတော့ ရုံးမှာ လုပ်နေဆဲသူတွေ လုပ်ဖို့ကြံရွယ်နေသူတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကျွမ်းကျင်လိုသူတွေ အတွက် တင်ဆက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်
1. What are the company’s internal policies and procedures?
ကုမ္ပဏီရဲ့အတွင်းမှာ လိုက်နာရမယ့် မူဝါဒစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ဘာတွေပါလဲ
2. How long are we allowed for lunch?
နေ့လည်စာအတွက် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ခွင့်ပြုပါသလဲ
3. How long is our lunch break?
နေ့လည် ထမင်းစားနားချိန်က ဘယ်လောက်ကြာကြာပါလဲ
4. What time should I report to work?
ဘယ်အချိန်မှာ အလုပ်ကို သတင်းပို့သင့်ပါသလဲ ၊ သတင်းပို့ရမှာပါလဲ (မနက်အလုပ်ဝင်ချိန်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်)
5. Is thereastrict policy on working hours?
အလုပ်လုပ်ချိန်တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ ရှိပါသလား
6. Are we allowed to wear casual clothes on Saturday?
စနေနေ့မှာ ရိုးရိုး အပြင်မှာဝတ်နေကျ အ၀တ်အစားမျိုးကို ၀တ်ဆင်ဖို့ ခွင့်ပြုပါသလား
(စနေကတော့ ယူနီဖေါင်းမ၀တ်ရတာ များတယ်လေ )
7. If I have ten vacation days, am I allowed to use them all at once?
ကျနော့်မှာ အပန်းဖြေခရီးသွားခွင့် (၁၀) ရက်ရှိတယ်ဆိုလျင် အဲဒါတွေ အားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းသုံးဖို့ ခွင့်ပြုပါသလား
8. Do our vacation days expire?
ကျနော်တို့ အပန်းဖြေခရီးထွက်ခွင့် ရက်တွေ ကုန်ဆုံးသွားပါပြီလား
9. Does this company allow using Facebook?
ဒီကုမ္ပဏီက facebook သုံးတာ ခွင့်ပြုပါရဲ့လား
10. What travel expenses items should I ask for?
ဘာခရီးသွားစရိတ် အမျိုးအစားတွေကို ကျနော် ပြန်လည်တောင်ခံသင့်ပါသလဲ
(ဘယ်ကိစ္စအတွက် ခရီးစရိတ်ပေးမှာလဲ ဆိုတာကို မေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ၊ ကုမ္ပဏီကိစ္စဆိုသော်လည်း အရေးကြီး ကိစ္စ မဟုတ်လျင် bus နဲ့သွားသင့်သွား ခြေလျင်လျှောက်သင့်လျှောက် စသည်ဖြင့် သွားရတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်)
internal policies = ကုမ္ပဏီတွင်း ကျင့်သုံးသည့် စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ
procedures = လုပ်ငန်းစဉ်များ
report = သတင်းပို့သည် ၊ အစီရင်ခံသည်
Expense = အသုံးစားရိတ်
Item = အမယ် ၊ အမျိုးအမည်
Causal = ထသွားလာသွားပုံစံဖြစ်သော ၊ ရိုးရိုးနေ့စဉ်သုံးနေကျ ၀တ်နေကျ ဖြစ်သော
Expire = သက်တမ်းကုန်သည် ၊ ကုန်ဆုံးသည်
Strict = တင်းကျပ်သော
Break = နားချိန် ၊ အားလပ်ချိန်
ှဆရာဝင်းနိုင်ဦး Facebook မှာ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။( ဆရာဝင်းနိုင်ဦး ကျန်းမာပါစေ)
English Dialogs (27)
Shopping သွားတဲ့အခါ ပြောကြပါ
(1) I would like to buyashirt.
ကျနော် ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည် ၀ယ်ချင်ပါတယ်
(2) We haveanew item for our customers. Actually, you would look great in this.
ကျနော်တို့ရဲ့ ဖေါက်သည်တွေအတွက် ပစ္စည်း အမယ်သစ် ရှိပါတယ် ။ တကယ်ပါ ၊ ခင်ဗျားနဲ့ သိပ်ပြီးကြည့်လို့ကောင်းသွားမယ်
(3) I don’t like this one. Please show me something else.
ကျနော် ဒီတစ်ထည်ကို မကြိုက်ပါဘူး ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျနော့်ကို တခြားတစ်ခုခု ပြပေးပါဦး
(4) What color are you looking for?
(5) I am looking forablue shirt, something to go with my jeans.
ကျနော် အပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ရှာနေပါတယ် ၊ ကျနော့်ဂျင်း(ဘောင်းဘီ)နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ တစ်ခုပေါ့
(6) I’m afraid this is the only blue shirt we have.
အားနာပါတယ် ဒီဟာက ကျနော်တို့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ တစ်ထည်တည်းသော အပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီပါပဲ
(7) This is not what I am looking for.
ဒါက ကျနော်ရှာနေတဲ့ဟာ မဟုတ်ပါဘူး
(8) Then I think I’ll shop around.
ဒါဆို ကျနော် ပတ်ပြီးရှာကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်
(9) I’ll take this one. And could I have two of these please?
ကျနော် ဒီတစ်ခုကို ယူပါမယ် ၊ ပြီးတော့ ကျနော် ဒီဟာတွေထဲက နှစ်ခု(နှစ်ထည်) ယူလို့ရမလား
(10) I’ll take two of these.
ကျနော် ဒီဟာတွေထဲက နှစ်ထည်ယူပါမယ်
(11) I’m sorry, that is all I have. I can tell you really like it.
စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ ၊ အဲဒါက ရှိတာ အကုန်ပါပဲ ၊ ခင်ဗျားတကယ်ကြိုက်မယ်လို့ ကျနော် ပြောနိုင်ပါတယ်
(12) Yes. The more I look at it, the more I like it. I wish you had more.
ဟုတ်တယ် ၊ အဲဒါကို ကြည့်လေ ကြိုက်လေပဲ ၊ ထပ်ရှိသေးလျှင်ကောင်းမယ်
(13) I ‘m sorry, I don’t. Can I get you anything else?
ဆောရီးဗျာ .. မရှိပါဘူး ၊ ခင်ဗျားကို တခြားတစ်ခုခု ပြပေးရမလား
(14) Please show me some dresses.
ကျေးဇူးပြု၍ ကျနော့်ကို ဂါဝန်လေးတွေ (တချို့ကို) ပြပေးပါ
(15) Who are you getting this for?
(16) I’m trying to findapresent for my wife.
ကျနော့်အမျိုးသမီးအတွက် လက်ဆောင်တစ်ခုကို ရှာနေတာပါ
(17) Do you haveaparticular style in mind?
စိတ်ထဲမှာ စဉ်းစားထားတဲ့ style တစ်ခုခု ရှိပါသလား
(18) Why don’t you takealook at this.
(20) I prefer that over this.
ကျနော်က အဲဒီ(ခပ်လှမ်းလှမ်းက)ဟာကို ဒါ(လက်ထဲရှိတာ)ထက် ပိုကြိုက်ပါတယ်
(21) I don’t like it. Can you show me others.
အဲဒါကို ကျနော်မကြိုက်ပါဘူး ၊ တခြားဟာတွေ ပြပေးနိုင်ပါမလား
(22) It’s all sold out apart from this one.
ဒီတစ်ခုကလွဲပြီး တခြားဟာတွေ အားလုံး ရောင်းလို့ကုန်သွားပါပြီ
(23) Thank you for shopping with us.
ကျနော်တို့ဆီမှာ ဈေးဝယ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
item (n) အမယ် ၊ အရာ ၊ ပစ္စည်း
customer (n) ဖေါက်သည် ၊ ဈေးဝယ်သူ
actually (adv) အမှန်တကယ်
dress (c.n) ဂါဝန် (ရေတွက်နိုင်သောနာမ်)
dress (u.n) အ၀တ်အစား (မရေတွက်နိုင်သောနာမ်)
particular (adj) အထူး ၊ သီးခြား ၊ သီးသန့်
နံပါတ် (20) မှာတွေ့ရတဲ့ I prefer that over this. ဟာ အမေရိကန်အသုံးဖြစ်ပါတယ်
prefer..over နေရာမှာ အင်္ဂလိပ်အသုံးဖြစ်တဲ့ prefer ..to ကိုပိုပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ် ။ သို့သော် တချို့ကတော့ prefer..over က ပိုပြီး တင်စားပြောဆိုလိုဟန်ရှိတယ်လို့လည်း သုံးသပ်မှုလည်း ရှိပါတယ် ၊ ကြိုက်ရာသုံးပါခင်ဗျာ
..Sayar WinNaingOo Facebook မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။( ဆရာဝင်းနိုင်ဦး ကျန်းမာပါစေ)
English Speaking - Job Expression (13) by Sayar WinNaingOo
English Speaking - Job Expression (13)
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အလုပ်ထဲမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို ပြောဆိုဖို့ ရေးမှာဖြစ်ပါတယ် ..
(1) Do you know what's wrong with the printer?
ပရင့်တာ (ပုံနှိပ်စက်) မှာ ဘာကမှားနေသလဲ ဘာကပျက်နေသလဲဆိုတာ ခင်ဗျားသိပါသလား
(2) When is the printer going to be fixed?
ပရင့်တာကို ဘယ်အချိန်မှာ ပြုပြင်မှာပါလဲ
(3) The printer is broken. Where is the other printer?
ပရင့်တာက ပျက်သွားပြီ ၊ တခြား ပရင့်တာက ဘယ်နေရာမှာပါလဲ
(4) The copy machine is jammed again.
မိတ္တူကူးစက်က နောက်တစ်ခါ ညပ်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့မရ ဖြစ်သွားပါပြီ
(5) We need to get the copy machine fixed.
ကျနော်တို့အတွက် မိတ္တူကူးစက်ကို ပြင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
(6) A technician is coming this afternoon to fix the copy machine.
ကျွမ်းကျင်သူက မိတ္တူကူးစက်ကို ပြင်ဖို့ ဒီညနေမှာ လာပါလိမ့်မယ်
(7) Where is the paper for the copy machine?
မိတ္တူကူးစက်အတွက် စက္ကူတွေက ဘယ်နေရာမှာပါလဲ
(8) We need to order more paper. We're running low. (running low = နည်းနေပြီ)
ကျနော်တို့ စက္ကူတွေကို ထပ်ပြီးမှာဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ၊ အခုကျနော်တို့မှာ နည်းနေပါပြီ
(9) I'm out of staples. Do we have any more in the supply room?
ကျနော့်မှာ စာရွက်တွဲတဲ့ ချုပ်စက်သုံး အပ်တွေ ကုန်သွားပြီ ၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်း အခန်းထဲမှာ ထပ်ပြီး ရှိပါသေးရဲ့လား
(10) My monitor is very old. It'salittle blurry and it gives meaheadache when I look at it foralong duration. Could I getanew monitor? (blurry = တုန်သောမှုံသော)
ကျနော့်ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်က သိပ်ကိုဟောင်းနေပြီ ၊ အဲဒါက နည်းနည်းမှုံပြီးတုန်နေတယ် ၊ ပြီးတော့ ကျနော်အဲဒါကို အကြာကြီးကြည့်လျင် ခေါင်းကိုက်လာတယ် ။ ကျနော် မော်နီတာ အသစ်တစ်လုံးရနိုင်မလားခင်ဗျာ ..
(11) My computer is too slow. It slows down my work. I would likeafaster computer. It will increase my efficiency on many of my tasks. (efficiency = လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရည်)
ကျနော့်ကွန်ပြူတာက နှေးလွန်းတယ် ၊ ကျနော့်အလုပ်တွေကို နှေးစေတယ် ၊ ကျနော် မြန်တဲ့ကွန်ပြူတာတစ်လုံး လိုချင်ပါတယ် ၊ အဲဒါက ကျနော့်ရဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေ အများကြီး လုပ်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်စေပါလိမ့်မယ် ။
ကဲ အလုပ်ထဲမှာ အဆင်မပြေတာတွေ ပျက်နေတာတွေ ပြောပေတော့နော်
Sayar WinNaingOo Facebook မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။ (ဆရာဝင်းနိုင်ဦး ကျန်းမာပါစေ)
ဇူလှိုင်လ၂၆ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့အထိ ဆရာထွန်း၏ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် အပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, June 30, 2015 Horoscope No comments
26th June 2015 - 02nd July 2015
အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်တက်သည်။
ငွေးကြေးနှင့်ပတ်သက်သော ကစ်စ လိမ်ခံထိတက်သည်။
စိတ်မတည်ငြိမ် တွေဝေနေပြီး ဘာကိုမျှလုပ်ချင်စိတ်မရှိဘဲ အချိန်ကုန်နေမည်။
အလုပ်ကိစ်စဆောင်ရွေက်ရာတွင် မိုးပြာရောင်ကို ၀တ်ဆင်ပြီး ကံကောင်းခြင်းကို ရယူပါ။
ကျန်းမာရေး။ ။ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်တက်သည်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ။
အချစ်ရေး ။ ။ အချစ်ကံခေသောရက်များ ဖြစ်သည်။
ယတြာ။ ။ တနေ့တာဘုရားဖူးခရီး ထွက်ပေးပါ။ ခရီးသွားတဦးကို သောက်ရေဒါနပြုလိုက်ပါ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ဘာမျှစိတ်မ၀င်စားဘဲ ယောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေမည်။
ဘာမဆို ခေါင်းအေးအေးထားပြီး လုပ်သင့်သော အချိန်ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းသစ် နေရာသစ် အဆက်အသွယ်သစ်များ ပေါ်လာမည်။
ဘာကိစ်စမဆို စိတ်တိုင်းမကျ ဖြစ်သည်မှလွဲပြီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မရှိပါ။
အလုပ်ကိစ်စဆောင်ရွက်ရာတွင် စတော်ဘယ်ရီ အရောင်ကို ၀တ်ဆင်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ကံကောင်းခြင်းကို ရယူပါ။
ကျန်းမာရေး။ ။ ခြေထောက်၊ ၀မ်းဗိုက် ဂရုစိုက်သင့်သည်။
အချစ်ရေး။ ။ အချစ်ပင်လယ်မှာ မုန်တိုင်းထန်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်သည်။
စိတ်မရှည်စရာ၊ စိတ်တိုင်းမကျစရာ များနေမည်။
အပြောမှား အလုပ်မှား ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားများ ဖြစ်တက်သည်။
အိမ်မကပ်ချင်တာ၊ အလုပ်မှာ စိတ်မ၀င် စားတာတွေဖြစ်တက်သည်။
စာချုပ်စာတမ်းကိစ်စတွေမှာ ပြသာနာများ ရှုပ်ထွေးတက်သည်။
အလုပ်ကိစ်စဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆင်စွယ်ရောင် ၀တ်ဆင်သင့်သည်။
ကျန်းမာရေး။ ။ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။
အချစ်ရေး။ ။ ချစ်သူနှစ်ဦးကြား ပြသာနာအကြီးတွေ့ ဖြေရှင်းရတက်သည်။ အဆင်လွဲခံတက်သည်။
ယတြာ။ ။ ၁၄ ပဌာန်းဒေသနာတော်ကို ရွတ်ဖတ်နာကြားပါ။ မေတ်တာပို့ပါ။
အိုးဟောင်း၊ အိတ်ဟောင်းရှိလျှင် စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။
အင်္ဂါနေ့သားနှင့် စပ်တူလုပ်ငန်းများ တွဲလုပ်ပါ။
ရင်ဆိုင်နေရသော ပြသာနာတစ်ခု မိမိဘက်မှ ဆုံးရှံးရတက်သည်။
ကျန်းမာရေး။ ။ မျက်စိနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါ ဖြစ်တက်သည်။ ဂရုစိုက်ပါ။
အချစ်ရေး။ ။ ချစ်သူအတွက် ဗျာများနေရမည်။
ယတြာ။ ။ ။ ဘုရားတွင် ခေါင်းလောင်း (၆)ချက်ထိုးပြီး လိုရာဆုတောင်းပါ။
မိတ်ဆွေများ၏ အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရတက်သည်။
အင်္ဂါသားသမီးတို့၏ အကူအညီကို ရမည်။
ကျန်းမာရေး။ ။ မျက်စိနှင့် ပတ်သက်သောဝေဒနာ ခံစားရမည်။
အချစ်ရေး။ ။ ချစ်သူနှင့်ခဏတာ ခွဲနေရတက်သည်။
ယတြာ။ ။ ကလေးများကို ငှက်ပျော်သီးဝေပေးလိုက်ပါ။
စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ တင်ရာမလုပ်သင့်သော ကာလဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းကိစ်စတွင် ငွေကြေးအရင်းအနှီးထည့်ဝင်ရန် မသင့်ချေး။
အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်း၊ အကျိုးအမြတ်မရှိ အရှုံးပေါ်နေမည်။
ကွဲကွာနေသော ဆွေမျိုးမောင်နှမများ၏ သတင်းစကားကြားရမည်။
အလုပ်ကိစ်စဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖြူရောင်ကို ၀တ်ဆင်ပါ။
ကျန်းမာရေး။ ။ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရတက်သည်။
အချစ်ရေး။ ။ အချစ်ရေးမှာ စိတ်ချမ်းသာရမည်။ လက်ဆောင်ပစ်စည်းများ ရတက်သည်။
ယတြာ။ ။ ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ပုတီစိပ်ပါ။ မေတ်တာသုတ် ရွတ်ဆိုပါ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အလုပ်အတွက် ပင်ပန်းကြိုးမနပ်ဖြစ်မည်။
ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အတော်စိတ်ရှုပ်ရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားထွက်မည့်ကိစ်စ၊ လူမျိုးခြားနှင့် အလုပ်တွဲလုပ်ရမည့်ကိစ်စတွင် အောင်မြင်မည်။
ဆွေမျိုးများက နှိပ်စက်တက်ပြီး မိတ်ဆွေကောင်း ဆရာကောင်းများက ကူညီမည်။
အလုပ်ကိစ်စဆောင်ရွက်ရာတွင် နံ့သာရောင်ကို ၀တ်ဆင်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ကံကောင်းခြင်းကို ရယူပါ။
ကျန်းမာရေး။ ။ ခြေထောက်၊ ခါး ဒဏ်ရာရတက်သည်။
အချစ်ရေး။ ။ ငယ်ရွယ်သူများအဖို့ ချစ်သူနှင့် ရပ်ဝေးခွဲရတက်သည်။
ယတြာ။ ။ မိမိထက်ကြီးကဲသူကို ထီးတစ်ချောင်း လက်ဆောင်းပေးလိုက်ပါ။
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံး ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းများတို့ဖြင့် ပြည့်စုံကြပါစေလို့...
ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး ဆန်ဒပြု ဆုတောင်းပေးလျက်....
http://www.burmeseclassic.com/baydin1.php မှ ပြန်လည်ရိုက်ကူး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, June 30, 2015 Android, androidfirmware, ImobileRoot, ImobleFirmware No comments
iMobile IQX Ken တွေ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် ဒီကောင်က ဂျပန်နည်းပညာ ယူသုံးထားတဲ့ အတွက် Imobile ထဲမှာ အကောင်ဆုံးဖုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ် ဒီကောင်လေက တစ်ခြာ imobile တွေလို Root tools တွေနဲ့ root ဖောက်လို့မရပါဘူ သူ့အတွက် root ရဖို့ ကျွန်တော်ဘော်ဒါကြီး ko lin က root
rom လေ လုပ်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ root လုပ်ဖို့ဆုံဖြတ်ထားတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အရင်ဆုံ မိမိဖုန်းထဲက၇ှိတဲ့
data တွေ အကုန်သိမ်ထားရပါမယ် firmwareအသစ် ပြန်တင်ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ဖိုင်းတွေ အရင်သိမ်ထားကြပါ လိုအပ်တဲ့သူတွေ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ကြပါ
IQX Ken Root Firmware ကိုဒေါင်းရန်
password က kolin
တင်နည်းကြတော့ အထူပြောစရာမလိုတော့ပါဘူ အကုန်တင်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, June 30, 2015 Android, AndroidApplication, AndroidMyanmarFont No comments
ကျွန်တော်ဘော်ဒါကြီး ko lin လုပ်ပေးထားတဲ့ android Lollipop အတွက် မြန်မာစာ အလွယ်တစ်ကူ သွင်းပေးနိုင်တဲ့ tools လေပါ bootsong လေပါအပိုလေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်..
Boot Song Change ဖို့အတွက် Button လေးတစ်ခု ထည့်ထားတယ်..
Root ဖောက်ထားဖို့တော့လိုအပ်မယ် လိုအပ်တဲ့သူတွေ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, June 30, 2015 IT, Knowledge No comments
Power supply မှ DCV အပြည့် ထွက်၊မထွက်ကို Meter နဲ့ စမ်းသပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ Power supply ကို casing အတွင်းမှ ဖြုတ်ယူပြီး P1 connector ကိုWire ကြိုး အစိမ်းနှင့် အနက်ကို ကြေးနန်းကြိုးနှင့် ထိုးထားပါ။ Power supply ကို power onပေးပါ။ ဒါဆို power supply က fan လည်လာပါလိမ့်မယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့ Power supply ကောင်းမွန်တယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ Powersupplyကောင်းတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ Power supply မှ အထွက် Wire ကြိုးတွေကရောသတ်မှတ်ထားတဲ့ DC volt တွေ အပြည့်ထွက်ရဲ့လား ဆိုတာကို ဒုတိယအနေနဲ့စစ်ဆေးရပါအုံးမယ်။ Power supply က AC မှ DC သို့ ပြောင်းလဲပေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်မီတာနဲ့တိုင်းတဲ့အခါ DC ကိုသာကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် meter channel ကို DCVolt သို့ ဦးတည်ပြီးလှည့်ပေးရပါမယ်။ ဟုတ်ပြီ။ DC Volt ကို လှည့်ထားပြီးပြီဆိုပါစို့။ မည်သည့် volt ကို တိုင်းမှာလဲ။ မီတာမှာတော့ DC volt ကို 0.5 volt မှ 1000 volt အထိပြသထားပါတယ်။ သင့်လျော်တဲ့ volt အားကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်တိုင်းတာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ power တွေက အများဆုံး 12V ထိပဲ အသုံးပြုပါတယ်။ အဲဒီတော့သင့်အနေနဲ့ 10 volt ထက်နည်းတဲ့ wire ကြိုးတွေကို 10 volt နဲ့တိုင်းပြီး၊ 12 volt ကိုတော့50 volt နဲ့တိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ Power supply က wire ကြိုးတွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုလည်းသိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးတွေကို အရောင်တွေနဲ့ ခွဲခြားထားပါတယ်။အရောင်တွေမတူသလို volt တွေလည်း မတူပါဘူး။ အရောင်က ခုနှစ်မျိုးရှိပြီး၊ အ၀ါရောင်က+12 volt၊ အနီရောင်က5volt၊ လိမ္မော်ရောင်က 3.3 volt၊ အညိုရောင်က 3.3V sense၊အပြာရောင်က -12 volt၊ အဖြူရောင်က -5 volt၊ ခရမ်းရောင်က +5 volt၊ အစိမ်းရောင်က power on၊ မီးခိုးရောင်က power good၊ အမည်းရောင်က ground တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာမှာ 12V ပဲ အများဆုံး သုံးတယ်လို့ ပြောခဲ့တာပေါ့။ Meter channelလေးကို အနီးဆုံး 10V ကို ရွှေ့ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို စပြီး တိုင်းကြည့်ကြရအောင်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ power connector ကို စစ်ကြပါစို့။ Meter မှ အနီနှင့် အနက် Jerk pinလေးနှစ်ခုကို ယူပြီး jerk pin အနက်ကို P1 connector မှာရှိတဲ့ wire အမည်းကြိုးကိုထိုးထားလိုက်ပါ။ ကြိုက်သည့် အမည်းရောင်ကြိုးမှာ ထိုးနိုင်ပါတယ်။ မီတာက jerk pinအနီကို P1 connector မှ အနီရောင်ကြိုးကို ထိုးလိုက်ပါ။ ဒါဆို မီတာ Box မှာ DCV တွင်+5V ပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို power supply က power အပြည့်ထွက်ပါတယ်။ အကယ်၍ 3Vလောက် ပြနေလျင်တော့ power အထွက် မကောင်းတော့ပါဘူး။ ၎င်းနည်းအတိုင်းပဲ အခြားသော wire ကြိုးတွေမှာလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ volt အားထွက်၊မထွက် တိုင်းတာပေးရပါမယ်။ 5V ရှိတဲ့ wire တွေကို တိုင်းတဲ့အခါ 5V ရှိရပါမယ်။ 3.3Vရှိတဲ့ wire တွေကို တိုင်းတဲ့အခါ 3.3V ရှိရပါမယ်။ 12V ရှိတဲ့ wire တွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုလျင်တော့ မီတာရဲ့ channel ကို 50V ကို ပြောင်းလဲပြီး ဦးတည်ပေးရပါလိမ့်မယ်။မီထာ box မှာ မီတာကိုကြည့်တဲ့အခါ DC ရဲ့ 10V မှာ ဆိုလျင် 0,2,4,6,8,10 ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။သင်က 5V ကို တိုင်းခြင်းဆိုလျင်တော့ မီတာတံလေးက4နှင့်6ကြားမှာ ပြပါလိမ့်မယ်။ 3.3Vကို တိုင်ခြင်းဆိုလျင်တော့2နှင့်4ကြားမှာ ပြပါလိမ့်မယ်။ DC ကို 10V ထက်ကျော်ပြီးတိုင်းမယ်ဆိုလျင်တော့ မီတာရဲ့ channel ကို 50 မှာ ထားရမှာပါ။ 50 မှာ ထားတဲ့အခါ0,10,20,30,40,50 ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 12V ကို တိုင်းတာလျင်တော့မီတာတံက 10 နှင့် 20 ကြားမှာ ပြနေပါလိမ့်မယ်။ P4 connector၊ Molex connector၊ Mini-Molex connector တို့ကိုလည်း အထက်ပါ နည်းအတိုင်းပဲ တိုင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ DCV တွေလည်း ထွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက အရေးကြီးတာကတော့မည်သည့် Wire ကြိုးကိုပဲတိုင်းတိုင်း မီတာရဲ့ Jerk pin အနက်ကိုတော့ power supply ရဲ့အနက်ကြိုးမှာပဲ ထိုးထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ DC 12V ထိပဲရှိတဲ့အတွက် လူကို အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် wire pin များ ပူးသွားလျင်တော့ လျော့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သတိထားပြီးကိုင်တွယ်သင့်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ Source: Product of MYDATA Game & Software CD /DVD Credit https://zawhlainghtun.wordpress.com
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, June 30, 2015 Android, AndroidApplication, AndroidSound No comments
ဆရာတစ်ယောက်မဟုတ်ပါနော် နည်းပညာလောကထဲစ၀င်လာကတည်းက ကျွန်တော် ဒီလိုမျိူး
အစီအစဉ်လေးလုပ်ခဲ့တာပါ .. အားလုံးကကျွန်တော့်ဆရာတွေပါ
ကျွန်တော့်ထံသို့ မေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စေ Mobile နည်းပညာများ( မနက် ၉ မှ ည ၉ နာရီထိ)
မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း သိသလောက်ကို ဖြေပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ....
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ကို Message နဲ့ပို့ပြီးမမေးဖို့ အထူးပြောလိုပါတယ် .ဖုန်းဆက်ပြီးသော်လည်းကောင်း
မေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ (only voice call
& Email )မအားတဲ့အချိန်ဖုန်းကိုင်မည်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်,အကယ်လို့ ဒီိပိုစ်က
ရလဒ်လေးတွေကြောင့်အဆင်ပြေလို့ နောက်ထပ်ဒီလိုများများတင်နိုင်အောင် Supply
FacebookA/C မရှိဘူးဆို ကြိတ်မှိတ်ခံစားမနေနဲ့ ဒါကိုနှိပ်လိုက်နော် ... Ok...
အဲဒါနဲ့တစ်ခု အလှူတန်းလုပ်ရအုံးမယ်ဗျ ကျွန်တော်ကအခုမှသိလို့ဖြစ်တာပါ TV မှာလည်းလာတယ်လို့ပြောပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ စာချင်းမတူပါဘူး ဒါက ပိုအဆင်ပြေပါတယ် File Size ကတော့ 18 GB ရှိတယ်ဗျ ကျွန်တော်တို့
မြောက်ဒဂုံကလိုင်းက ကောင်းချက်က ၉ လောက်ရှိတယ် (ဟဲ့ရွှဲ့ပြောတာ)
ကျွန်တော်တို့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ မွေးတဲ့အချိန်ကစပြီး နောက်ဆုံးခရီးထိဗုဒ္ဓရဲ့ ခရီးလမ်းကို
ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့(ကျွန်တော်တော့်ကြိုက်တယ်ဗျာ) ဗီဒီယိုကို တင်ပေးပါ့မယ် upload လုပ်တုန်းပါ..
မဒေါင်းနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ တရားအလှူအနေဖြင့် ကျွန်တော့်ဆိုင် - မြောက်ဒဂုံ-35 မှတ်တိုင်အနီး-<<ဆွေသဟာ>>
Mobile Sales & Service ကိုလာရောက် Free ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် ...
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိင်ဦး Tuesday, June 30, 2015 AndroidProblem No comments
ဖုန်း Screen ထထလင်းနေတဲ့ error...ပါခင်ဗျာ.....
Android ဖုန်းကိုင်ဆောင်တဲ့ user များ ဖုန်းကို power ခလုတ်နှိပ်ပီ Screen off ထားတဲ့အချိန်မှာ
Screen ခနခနပြန်ပွင့်တဲ့ error လေးကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်......
အခု အဲ့ဒိ error လေးကို အခုပေးတဲ့ ဆာ့ဝဲလ်လေးနဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
Virus ရှိတဲ့ app & game တွေဖုန်းထဲကိုသွင်းထားမိခြင်း.....မိမိတို့ သွင်းထားတဲ့ app & game တွေဟာ
မိမိတို့ device နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း စတဲ့အချက်လေးတွေကြောင့် Screen ပြန်ပြန်ပွင့်ရခြင်းလို့ထင်ပါတယ်.....
ဒါကြောင့် အခုကျွန်တော်ပေးတဲ့ TrustGo Mobile Security လေးကို သင့်ဖုန်းမှာ
အင်စတောလုပ်ပီ Security Scanner လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ....
ဒီ TrustGo Mobile Security မှမဟုတ်ပါ....
အခြားနာမည်ကြီး Antivirus ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုခု သင်ဖုန်းမှာရှိရင်လည်းရပါတယ်...
Scan စစ်တဲ့အချိန်ဟာ သင်ဖုန်းထဲမှာ သွင်းထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်အနည်း/အများပေါ်မူတည်ပီ ကြာနိုင်ပါတယ်....
Scan စစ်ပီသွားရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ High Risk, Low Risk ဆိုပီ
တွေ့တဲ့ဖိုင်လေးတွေကို delete/uninstall လုပ်ပစ်လိုက်ပါ....
TrustGo ဆော့ဝဲလ်လေးကိုအသုံးပြုချင်သူများ reply လေးပေးပီယူပါခင်ဗျာ.....
>>> TrustGo Mobile Security <<<
မးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း သိသလောက်ကို ဖြေပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ....
& Email )မအားတဲ့အချိန်ဖုန်းကိုင်မည်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်,အကယ်လို့
ဒီိပိုစ်က ရလဒ်လေးတွေကြောင့်အဆင်ပြေလို့ နောက်ထပ်ဒီလိုများများတင်နိုင်အောင် Supply
http://daweiit.blogspot.com မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။